Tim Cook dia nahazo $ 10,5 tapitrisa tamin'ny taon-dasa | Vaovao IPhone
Tim Cook no tale jeneralin'ny Apple, araka ny eritreretin'ny maro amintsika fa olona mety hahazo vola be izy, indrindra raha heverintsika fa Apple dia iray amin'ireo orinasa sarobidy indrindra eto an-tany ary mahazo izany ny vola be indrindra manatanteraka ny fivezivezeny. Araka ny vinavina vaovao, sivan'i MacRumors, Hitan'Andriamatoa Tim Cook ny fiakarana kely amin'ny fidiram-bolany amin'ity taona ity raha ampitahaina amin'ny tamin'ny taona lasa. Raha ny tena manokana, ny CEO ankehitriny an'ny Apple dia nahazo $ 10,3 tapitrisa nandritra ny tetibola 2015, izay fiakarana lehibe rehefa mieritreritra ianao fa nandritra ny taom-piasana 2014, dia nahazo $ 9,2 tapitrisa.
Midika izany fa iray tapitrisa dolara mahery ny vola azon'i Tim Cook tamin'ny taon-dasa. Raha ny tena manokana, ny karaman'i Tim Cook tamin'ity taona ity dia nopotehan'ny 2 tapitrisa dolara ho karama raikitra, $ 280,00 ho onitra ary tsy latsaky ny $ 8 tapitrisa fanentanana. Ireny famporisihana ireny dia mety ho iray amin'ireo antony manosika indrindra ny CEO an'ny Apple hampiroborobo vaovao be dia be mbola tsy tazana tao Apple afa-tsy ny fotoan-tsarotra lehibe niaretany. Ny isan'ny vokatra dia nampitomboina be, izay mahafaly sehatra iray an'ny mpanjifa fa tsy tia ny hafa.
Saingy tsy hamela ny fampahalalana eto izahay, manana ny tombotsoan'ny mpiasa hafa koa izahay. Angela Ahrendts, ohatra, dia nahazo onitra 25,8 tapitrisa dolara, raha oharina amin'ny 73 azony tamin'ny taon-dasa, saingy raisinay araka ny efa nolazainay tamin'ny taon-dasa, fa nahazo ampahany betsaka tamin'ny Apple sy bonus i Angela Ahrendts fotoana nandraisan'izy ireo karama. Eddy Cue ho an'ny anjarany dia nahazo $ 25 tapitrisa mahery nandritra ny 2015, ary koa ny sandam-bola be sy ny trosa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Nahazo 10,5 tapitrisa dolara i Tim Cook tamin'ny taon-dasa
Vaovao tsara, mpamaky fonja: jailbreak iOS 9.2.1